Google Pixel2တွင်အသံဖိုင်တွင်အမှားတစ်ခုရှိသည် Androidsis
Google Pixel2ရဲ့အသံပြတ်တောက်သွားတယ်
အက်ဒါဖာရီနို | | မိုဘိုင်း
El Google Pixel2မှာအကောင်းဆုံးရက်သတ္တပတ်မရှိပါ။ ဂူးဂဲလ်ရဲ့အဆင့်မြင့်အဆင့်ကအဆင့်ကို ဦး တည်နေပြီးကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အကြောင်းပြောပြခဲ့သည် အသုံးပြုသူအချို့သည်ဖန်သားပြင်တွင်တွေ့ကြုံနေရသောပြproblemနာဖြစ်သည် ထို့အပြင်ဖုန်းသည်နာမည်ကြီးခဲ့သည် JerryRigEverything အားဖြင့်ခုခံစမ်းသပ်နှင့်ရလဒ်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ခဲ့ပေ။
ဒီဟာအလုံအလောက်မကောင်းဘူးဆိုရင်သုံးစွဲသူပိုများတယ် Google Pixel2ရှိပြadditionalနာများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားခြင်း။ အသုံးပြုသူများသည်aမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမီးရှို့ကြ၏ တယ်လီဖုန်း၏။ ထို့အပွငျကပုံပေါ်ပါတယ် အသံချို့တဲ့သည် ကိရိယာပေါ်မှာ။ ဘာဖြစ်နေတာလဲ?
El ဂူဂဲလ်၏ထင်ရှားသောအသစ်သောပြproblemsနာကဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ကိရိယာနှင့်အသံပြproblemနာကိုသတင်းပို့နေသောအသုံးပြုသူများရှိပါသည်။ ကြည့်ရသည်မှာဖုန်း နားထဲကိုရောက်တဲ့အခါထူးဆန်းတဲ့ဆူညံသံတွေထွက်လာတယ်။ ၎င်းသည်အသံတွင်တွေ့ရှိရသောတစ်ခုတည်းသောအမှားမဟုတ်ပါ။ ပုံရသည် Google Pixel2စပီကာများသည်တူညီသောအသံပမာဏမရှိပါ.
El ထိပ်ဆုံးစပီကာ အဆိုပါ smarphone ကနေ အနိမ့်စပီကာထက် 10 dB အသံ။ အချို့သောသတင်းရင်းမြစ်များကမူ Google သည်ဖုန်းပေါ်တွင်တုန်ခါမှုကိုတားဆီးရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထူးဆန်းသော်လည်းသူတို့ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုကိုထမ်းဆောင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
Google သည်ဤပြနာများကိုသတိထားမိနေပြီ သူတို့ဟာလက်ရှိမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုလုပ်နေတယ်။ များသောအားဖြင့်ဤအမှားများကိုaမှတဆင့်တည့်မတ်ပေးလိမ့်မည် OTA မှတဆင့် update။ သူတို့ကို၏ဇာစ်မြစ်ကိုယခုအချိန်အထိမသိနိုင်ပေမယ့်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်ရှင်းလင်းချက်အချို့ကိုမျှော်လင့်ကြသည်။
El Google Pixel2က Google ကိုလိုချင်တာထက်ပိုပြီးဒုက္ခပေးနေတယ်။ ဖုန်းရောင်းအားကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်အရာ၊ အထူးသဖြင့်ယခုအချို့သောနေ့စွဲများသည်အရေးကြီးသည် Black ကသောကြာနေ့ y Navidad ပိုမိုနီးကပ်လာပြီ Pixel2မှာပါတဲ့အမှားတွေကိုမင်းတို့ဘယ်လိုထင်သလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Google Pixel2ရဲ့အသံပြတ်တောက်သွားတယ်
Android အတွက် Chrome 62 သည်အရှိန်မြှင့်သော download များကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်